सन्दर्भ कानुन दिवस : यी हुन् कानुन अटेरी गर्न र कानुन मिच्न खप्पिस बैंकर र कथित 'कर्पोरेट भिआइपी'हरु...!
ARCHIVE, INVESTIGATION » सन्दर्भ कानुन दिवस : यी हुन् कानुन अटेरी गर्न र कानुन मिच्न खप्पिस बैंकर र कथित 'कर्पोरेट भिआइपी'हरु...!
अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- आज कानुन दिवस । सर्वप्रथम त कानुनी राज्यका सबै नागरिकहरुलाई कानुन दिवसको दिन शुभकामना । तर देशमा विधिको शासन छ भन्न पनि अफ्ट्यारो भएको यो बेलामा कानुन दिवसको खास औचित्यता देखिंदैन । किनकि देशमा कानुन त छ तर त्यसको कार्वनयन निकै फितलो छ । अर्थ सरोकार डटकमको यो अंकमा हामी कानुन नटेर्ने बैंकर र मिच्ने बैंकरहरुका कुरा गर्दैछौं । बैंकरमात्र होइन कानुनको धज्जी उडाउने केहि इन्सुरेन्सका ठुला-ठालूको चर्चा पनि आजको यो अंकमा हामी गर्दैछौं ।
इन्सुरेन्स क्षेत्रका यी कथित 'भीआइपी' जसलाई देशको कानुनले छोएको छैन !
एसियन लाइफ इन्सुरेन्सका अध्यक्ष विजय सरावगी नियम अनुसार पदमा बस्न पाउँदैनन् । बिमा समितिको नयाँ निर्देशिका अनुसार कुनै पनि नगरपालिकाको मेयर बीमा कम्पनीको अध्यक्ष हुन पाउँदैन । तर उनी अहिले पनि पदमै छन् । उनलाई यो देशको कानुनले छुन सकेको छैन । उनीमात्र होइन सोहि कम्पनीमा सञ्चालक रहेका दिनेश लाल श्रेष्ठले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन मिचेका छन् । नियम अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख भएको मान्छे कुनै पनि अर्को पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने वयवस्था छ । तर उनी गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्समा कार्यकारी प्रमुख नै छन् तर एसियन लाइफ इन्सुरेन्समा सञ्चालक पनि छन् । उनलाई पनि यो देशको कानुनले खास छोएको छैन ।
यीनीहरु जसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा कानुन लाग्दैन
माउन्ट मकालु डेभलोपमेन्ट बैंकमा लछुमन तिवारी नियम मिचेर बसेका छन् । एक त सञ्चालक हुन स्नातक पास हुनुपर्छ । उनले एसएलसी मात्र पास गरेका छन् । तर पनि बैंकमा सञ्चालक बनेर बसेका छन् । बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत भन्दा माथि हुन नहुने भन्ने स्पष्ट नियम यो देशमा देशकै सरकारी बैंकले टेर्दैन । कृषि बिकास बैंकले यो नियमको उल्लङ्घन गरेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले पनि नियम उल्लङ्घन गरेको छ । वा नेपाल राष्ट्र बैंकले यिनीहरुलाई ठेगान लगाउन नसकेको हो, त्यो उनीहरु नै जानुन् । तर यस्ता कानुन नमान्नेहरुलाई कसैले पनि कारवाही गर्न सकेको छैन । नियम अनुसार क्वालिफिकेसन नै नपुगेका सीएन पाण्डेलाई मेगा बैंकले सञ्चालक बनायो । तर पनि न मेगालाई कानुनले छोयो, न सीएन पाण्डेलाई ।
कानुनको धज्जी उडाउनेहरु नै कार्यकारी पदमा
कहिले नक्कली सुन काण्ड त कहिले के, सधैं काण्ड नै काण्डमा फस्ने सिटिजन्स् बैंकका डेपुटी सीइओ गणेश राज पोखेरेल गैरकानुनी काम गरेर सजाय समेत भोगीसकेका व्यक्ति हुन् । उनले लेखा व्यवसायको आचरण विपरित काम गरेको भन्दै नियामकले उनलाई कारवाही गरिसकेको छ । तर उनको आचरणमै समस्या देखिएको भएपनि जनताको पैसाको जिम्मा लिएको सिटिजन्स बैंकले उनलाई अझै पनि डेपुटी सीइओ बनाएर राखेको छ । राष्ट्र बैंकले उनलाई केहि गर्न सक्दैन । अझ उनी बैंकको सीइओ बन्ने लाइनमा छन् । उनी सीइओ बन्छन् वा बन्न पाउँदैनन् भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । भमा खुलमखुला गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति कार्यकारी पदमा भएको संस्थाले जनताको अरवौं पैसाको रक्षा गर्ला ? ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेपनि यहाँ कानुनको कसलाई मतलव छ र ?
गैरकानुनी काम गर्ने मर्चेन्ट बैंकलाई पनि कारवाही भएन !
यसो त नेपालका मर्चेन्ट बैंकहरु पनि कानुन मिच्न खप्पिस छन् । केहि समय अघि समृद्धि क्यापिटल नामक मर्चेन्ट बैंकले गैरकानुनी काम गरेको पुष्टि हुँदा पनि धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीमा केहि कथित भीआइपीहरुको लगानी भएकाले पनि धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनीलाई कारवाही गर्ने आँट गरिरहेको छैन । इङ्गिश घिमिरे उक्त कम्पनीका सीइओ हुन् । उसले गैरकानुनी रुपमा धितोपत्र लिमिटेड नै आफ्नो कम्पनी हो भनेर जनतामा भ्रम छर्यो, धितोपत्र बोर्डले निषेध गरेका कार्यहरु गरेर बजारमा खेल्यो, तर यहाँ ठुलाहरुलाई कहाँ कानुन लाग्छ र ?
प्रकाशित : Wednesday, May 09, 2018
२०७६ सालमा कुन राशि भएका व्यक्तिको कति कमाउने योग छ ? हेर्नुहोस् बार्षिक आर्थिक राशिफल (भिडियो)
'एक हप्तापछि विवाह छ, बैंकबाट पैसा नै हरायो', नेपालमा पैसा हराउँदा बैंक भन्छ, 'भारत गएर उजुरी गर' (कागजातसहित)
'करोडौँको सम्पत्ति थियो, महालक्ष्मी बैंकका कारण अहिले भात खान साथीभाइसँग सय-पचास माग्छु' (भिडियो)
जीवन बीमा कति रुपैयाँ बराबरको गर्ने ? यस्तो छ रोचक 'फर्मूला' र तपाईलाई थाहा नभएको तथ्य (भिडियो)
EXCLUSIVE : कैलाश बिकास बैंकमा यसरी भयो करोडौँ हिनामिना, ब्रान्च मेनेजर निलम्बित ! (भिडियो रिपोर्ट)
EXCLUSIVE: सहकारीको अनौठो ठगी ! मरेको मान्छेले पैसा निकालेपछि न्याय खोज्दै रवि क्षेत्री (भिडियो)
लुक्ला विवान दुर्घटना : क्याप्टेन उछिट्टीएर बाँच्न सफल, यस्तो छ निधन र घाइतेहरुको नामावली (अपडेट)
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आयोजनामा आज नेपाल बन्द, प्रभाव कस्तो छ ?
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारी ३ लाख धरौटीमा रिहा !